I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 13.5.1 | IPhone iindaba
I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 13.5.1
Njengesiqhelo emva kokumiliselwa kohlaziyo olutsha lwe-iOS, Iiseva ze-Apple ziyeke ukusayina ingxelo 13.5.1 Zombini i-iOS kunye ne-iPadOS, ukuthintela abasebenzisi ekubeni babe nakho ukwehlisa le nguqulo emva kokukhutshwa kwe-iOS 13.6.
Isizathu sokuba iApple iyeke ukusayina iinguqulelo zangaphambili ayisiyonto ngaphandle kokuthintela izixhobo zomsebenzisi unokuba semngciphekweni ngokuchasene nokuxhaphaka okanye ukuba semngciphekweni okuye kwafunyanwa kwiinguqulelo zangaphambili, nangona esinye sezona zizathu ziphambili kukuthintela ukuqhekeka kwejele.
I-Apple ikhuphe i-iOS 13.5.1 ye vala ukuxhaphaza kwejele kuzo zonke izixhobo zeApple ilawulwa yi-iOS 13.5. Nge-iOS 13.5.1, kwakusele kunokwenzeka ukuba kuqhekezwe izixhobo ezilawulwa yile nguqulo.
Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ngomngxunya wokhuseleko ofumanekayo kuwo wonke izixhobo ezilawulwa ngabaprosesa be-Apple A7 ukuya ku-A11, ngokusebenzisa i-checkra1n jailbreak thanks to checkm8 boot exploit.
Ukuba isixhobo sakho asilawulwa ziiprosesa ukusuka kwi-A7 ukuya kwi-A11, kunokwenzeka kuphela I-jailbreak iOS 13.5 kunye ne-iPadOS 13.5 izixhobo ezilawulwa nge-Unc0ver kunye neOdyssey. Okwangoku azikho iindaba ezibonisa ukuba i-iOS 13.6 izakuchaphazeleka yi-jilabreak, nangona ngokutsho komsebenzisi we-Twitter @ _Simo36, inokuba nakho ukubasesichengeni sokuqhekeka kwejele.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ndapapasha inqaku elinxulumene nephepha le- Ubomi bebhetri ye-iOS 13.6, ubomi bebhetri ukuba yancitshiswa kuzo zonke iitheminali ezihlalutyiweyo Xa kuthelekiswa neenguqulelo zangaphambili ze-iOS, nangona kubonakala ngathi iApple ayikhathali kangako, kwaye ukuba unengxaki yebhetri, kuya kufuneka unyamezele kude kube luhlobo olulandelayo olukhutshwa yi-iOS ye-iOS, kuba awukwazi ukubuyela kuhlobo lwangaphambili .
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 13.5.1
I-Alexa yeeapps isungula kwaye ilawula usetyenziso kwi-iOS
I-Apple isungule isizukulwana esitsha se-AirPods kunye ne-AirPods Pro ngo-2021